MTA na-akpọ ụwa òkù ka ọ rọọ Malta Ugbu a… Gaa na Emechaa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » MTA na-akpọ ụwa òkù ka ọ rọọ Malta Ugbu a… Gaa na Emechaa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nrọ Malta ugbu a
“Nrọ Malta Ugbu a… Nleta Mgbe Emechara” bụ aha mkpọsa nkwado nke thelọ Ọrụ Njem Nleta Malta malitere taa na ebumnuche nke ichetara ndị ọbịa nwere ike ịma mma na-echere ha na Malta ozugbo ọ ga-ekwe ndị mmadụ omume ịmalite njem ọzọ. N'iji vidiyo vidiyo nke 60 nke abụọ mepụtara n'asụsụ iri na anọ, a ga-eduzi mkpọsa ahụ na ntanetị, ma soro usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-akwalite otu ozi ahụ.
N'ikwu banyere mkpọsa a, Mịnịsta maka njem nleta na ndị ahịa na nchekwa, Ọ bụ Julia Farrugia Portelli, kwuru, sị: “Mgbe anyị chere ọnọdụ ịma aka ihu dịka nke anyị na-ahụ ugbu a, mmeghachi omume a na-ahụkarị bụ nke ịkwụsị ahịa niile ma laghachi kpamkpam. Otú ọ dị, nke a abụghị nkà ihe ọmụma ndị Malta Tourism Authority na Gọọmenti nke Malta nakweere. Na ntụzịaka, anyị chepụtara mkpọsa, gbadoro ụkwụ n'akụkụ ebe dị iche iche masịrị anyị, nke anyị ga-eji mee ka ndị chọrọ ịbịa leta ha na Maltese Islands wee kụziere ha ka ha bịa mgbe oge gachara.
Carlo Micallef, Osote onye isi na onye isi ahịa ahịa na Malta Tourism Authority, kwuru na n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na njem ndị mba ụwa na-akwụsị ugbu a, ọrụ ndị ahịa ahịa MTA gara n'ihu. "N'oge a, anyị na-eme mkpọsa nkwalite dị iche iche n'ọtụtụ mba na ebumnuche nke idebe Malta, Gozo na Comino n'uche maka ndị ga-abụ ndị ọbịa n'ọdịnihu na agwaetiti anyị."
Johann Buttigieg, Onye isi oru nke Malta Tourism Authority, kọwara otú na mgbakwunye na ịzụ ahịa, MTA na-arụsi ọrụ ike na ọrụ ndị e mere iji melite akụrụngwa yana ọkwa ọrụ enyere site na mmemme nke ọzụzụ maka ndị ọrụ metụtara ngalaba ndị njem. “Mmadu aghaghi iburu n’uche na, ngwa ngwa nsogbu COVID-19 kwụsịrị, asọmpi n’etiti ebe ndị njem ga-adị ọkụ karịa mgbe ọ bụla. Ya mere, ọ dị oke mkpa na anyị so na ndị na-agba ọsọ n'ihu mgbe nke a mere na na, yana ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị, anyị nwere ike ịnye ngwaahịa kachasị mma iji dọta ndị ọbịa na Malta dịka anyị na-eme tupu ọrịa a amalite.
The agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, n'etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi nke ihe nketa na-enweghị atụ, gụnyere nke kachasị elu nke UNESCO World Heritage Sites na mba ọ bụla-ala ebe ọ bụla. Valletta wuru ndị Knights dị mpako nke St John bụ otu n'ime nlegharị anya UNESCO na European Capital nke Omenala maka afọ 2018. Ebumnuche Malta na okwute sitere na ụlọ ọrụ okike kacha ochie na-akwụghị ụgwọ ọ bụla n'ụwa, rue otu n'ime Alaeze Britain kachasị egwu. usoro nchebe, ma gunyere ngwakọta nke ụlọ, okpukpe na usoro ndị agha site n'oge ochie, ochie na oge oge a. Site na ihu igwe na-achasi ike, osimiri mara mma, ndụ abalị na-eme nke ọma na afọ 7,000 nke akụkọ na-atọ ụtọ, enwere nnukwu ihe ị ga-ahụ ma mee, na-eme ka ọ dị mfe nrọ Malta Ugbu a. Maka ozi ndị ọzọ na Malta, gaa na www.visitmalta.com.